Qiimaha qiimaha 'qaawan' jaantusyada iyadoo la adeegsanayo shumacyada Heikin Ashi, sida fudud u qulquli karo dhibka FXCC Blog
19 Inta u dhaxaysa laynka • 10916 Views 1 Comment Qiimaha qiimaha 'qaawan' jaantusyada iyadoo la adeegsanayo shumacyada Heikin Ashi, sida fudud u qulquli karo dhibka
Ma jiraan dood ku saabsan tusisyada ku salaysan ganacsiga dhabta ah ee 'shaqeeya', inkastoo heerarka hannaanka laga soo iibsaday ganacsatada qibrada leh iyo kuwa guuleysta, tilmaanbixinta asaasiga ahi waxay istaagtay imtixaanka waqtiga. Ganacsiga saldhigga ah wuxuu si gaar ah ugu wanaagsan yahay shaxda maalinlaha, taas oo ah waqtiga wakhtiga abuura ee tusayaasha kala duwan ee loogu talagalay tilmaamayaasha lagu shaqeynayo.
Haddii ganacsatadu ay akhriyaan maqaalo ay ku jiraan fikrado ka yimid falanqeeyayaasha hormoodka ah ee hay'adaha waaweyn waxay si dhakhso ah u ogaan doonaan in, ugu sareeya silsiladda raashinkeenna, tilmaamayaasha loo isticmaalo si aad wax ku ool ah. Waqtiga ka dambeeya maqaallada waqtigaa waxay tixraaci doonaan falanqeeyayaasha tusaale ahaan JP Morgan ama Morgan Stanley iyo isticmaalkooda tusmooyinka qaarkood.
Qoraallada Bloomberg ama Reuters, ayaa badanaa tilmaamaya isticmaalka tilmaamayaasha korjoogtada ah ama kuwa ka soo horjeeda sida RSI iyo stochastics, ama soo xigashada Bollinger bands iyo ADX. Ganacsato badan oo ka mid ah kuwa ugu sareeya xirfaddooda ee hay'adaha waxay dhab ahaantii isticmaalaan tilmaamo hal ama dhowr ah si ay u dejiyaan go'aanadooda. Maqaalkan sidan oo kale ayaa badanaa tilmaamaya fikradda ku saabsan soo dhoweynta tirada tirooyinka iyo celceliska dhaqdhaqaaqa fudud sida 200 SMA. Si kastaba ha ahaatee, inkastoo waxtarka tilmaamayaasha waxaa jira dhaleeceyn adag oo lagu tartamayo - tilmaamahan.
Inkasta oo ra'yiga laga yaabo in lid ku ah ma jiraan tilmaamayaal hogaaminaya, dhammaan tilmaamayaasha aynu baranay dhab ahaantii. Ma jiraan tilmaamo muujinaya dhaqdhaqaaqa qiimaha. Tilmaamo badani waxay soo jeedin karaan dhibcaha isbeddelka, ama daalkii socodka dhaqdhaqaaqa, laakiin cidina ma saadaalin karto halka qiimaha uu ku socdo. Nidaamyada ganacsiga saldhigga ah iyo istaraatajiyadaha guud ayaa ah qaabab aad u fiican oo lagu qiimeeyo qiimaha.
Taas oo ah la'aanta tayada saadaalinta ah waxa keena ganacsiyo badan oo ka tagaya istaraatiijiyooyin ku salaysan ficil ahaan qiimaha ficilka. Ficilka qiimaha waa, iyadoo la aamini karo ganacsatada khibrada leh ee guuleysta, habka ganacsiga oo kaliya oo si dhakhso ah u matali kara dareenka maalgashadayaasha iyo sidaasi oo kale ayaa suurtagal ah in ay hoggaamiso sida ka soo horjeeda shaxanka, gaar ahaan wakhti maalinle ah.
Ficilka qiimaha badanaa wuxuu isku kalsoonaan karaa ganacsatada cusub
Inkasta oo ay fududahay waxqabadka qiimaha waxa weeye ganacsade ganacsi oo cusub oo u muuqda inuu u baahan yahay in la tijaabiyo astaamaha saldhigga ganacsiga ka hor inta aan la ogaan oo lagu tijaabiyo waxa aan u adeegsano "waxqabad qiimo". Mid ka mid ah sababaha ay ganacsatada cusubi ku wareersan yihiin fikradda sarreeya sare ama hoos u dhaca hooseeya iyo sarreeya hooseeya, hooseeya.
Marxaladdan waxaa laga yaabaa in ay caqli gal tahay in ay bixiso qeexida ficil qiimeyn ah oo inta badan ganacsatada iyo falanqeeyayaasha ay ku heshiin doonaan ...
Waa maxay ficilka qiimaha?
Tallaabada qiimaha waa qaab farsamo farsamo. Maxay kala duwan tahay noocyada farsamooyinka farsamada ee ugu muhiimsan waa in diiradda ugu weyni ay tahay xiriirka qiimaha amniga ee hadda la qiimeeyo qiimihii la soo dhaafay iyada oo aan laga soo qaadin qiimaha laga soo qaatay taariikhda qiimahaas. Taariikhdaas taariikhda ah waxaa ka mid ah sarrifka sarreeya iyo dheelitirka qulqulka, khadadka isbeddelka, iyo taageerada iyo heerarka iska caabida. Mashruucan qiimaha fudud ee ugu fudud wuxuu isku dayayaa in uu sharaxo geeddi-socodka bini-aadanka ee lagu magacaabo ganacsatada khibradda leh, kuwa aan anshax-marin ahayn sida ay u ilaaliyaan una ganacsadaan suuqyadooda. Ficilka qiimaha ayaa si fudud u bedelaya qiimaha - ficilka qiimaha. Waxaa si sahlan loo arkay suuqyada halkaasoo kuqorida iyo qiimaha badeecadda ay ugu sarreeyaan.
Ganacsadayaashu waxay fiiriyaan xajmiga qaddarka, qaabka, jagada, korniinka (marka la daawanayo qiimaha dhabta ah ee waqtiga dhabta ah) iyo mugga (optionally) ee baararka ku yaal bar ama OHLC shaxda, ka bilaw sida fudud oo ah hal bar, badanaaba la socda shaxanka qaababka lagu helo falanqayn farsamo oo ballaadhan sida celceliska dhaqdhaqaaqa, khadadka isbeddelka ama kala duwanaanta ganacsiga. Isticmaalka falanqaynta ficilka qiimeynta dhaqaalaha ma aha mid ka reeban isticmaalka farsamooyinka kale ee falanqaynta, iyo dhinaca kale, ganacsade qiimo dhimis ah wuxuu ku tiirsanaan karaa tarjumaadda habdhaqanka qiimaha qiimaha si loo dhiso istaraatijiyad ganacsi.
Ficilka qiimaha adoo isticmaalaya shumacyada Heikin Ashi oo keliya
Inkastoo guud ahaan macquul ahaansho waxaa jira hab lagu qiimeeyo ganacsiga qiimaha waxqabad kaas oo fududeynaya geedi socodka xitaa dheeraad ah - adigoo isticmaalaya shumacyo Heikin Ashi oo si khaas ah loo adeegsanayo iyada oo aan jirin khadad isbeddel ah, heerka dhibicda ama isticmaalka celceliska dhaqdhaqaaqyada muhiimka ah sida 300 SMA.
Shamciyadaha Heikin-Ashi waa shaar ka mid ah shamacadaha Japan. Shamciyadaha Heikin-Ashi waxay isticmaalaan xogta furan ee laga soo bilaabo xilligii hore iyo xogta furan ee aad u hooseeysa ee xilligan xaadirka ah si ay u abuuraan shamilyaro dib u furan. Shumaca dhalashadu waxay dhalaalaysaa dhawaaqa qaylo-dhaan si ay si fiican ugu qabato qabashada. Jijiga, Heikin macnaheedu waa "celcelis" iyo "ashi" micnaheedu waa "jaanis". Isku soo wada duub, Heikin-Ashi wuxuu u taagan yahay qiimaha celceliska qiimaha. Heikin-Ashi Shamacaaliyeyaasha looma isticmaalo sida shamacyada caadiga ah. Qodobo kala duwan oo ka mid ah sheyga bullshiilka ah ama xajmiga leh ee ka kooban shamuuska 1-3 waa inaan la helin. Taa bedelkeeda, shamciyayaashan waxaa loo isticmaali karaa inay tilmaamaan muddooyinka xilliyada socdaalka, dhibcaha dib u celinta iyo qaababka falanqaynta farsamooyinka caadiga ah.
Waxyaalaha fudud ee shumacyo Heikin Ashi
Ganacsiga shumacyada Heikin Ashi ayaa fududaynaya fikradda guud ahaanba maxaa yeelay waxaa jira wax aad u yar in la eego, lafaguro oo laga sameeyo go'aanada. "Reading" shumacyada, marka la eego dabeecadda qiimaha, waxay noqotaa mid fudud, gaar ahaan marka la barbar dhigo qaababka caadiga ah ee shamaca oo u baahan doona xirfad badan iyo tababar si loo furo.
Tusaale ahaan, Heikin Ashi waxaa ku jira laba qaab oo keliya shaxda shaxda maalinlaha ah ee tilmaamaya inay noqdaan (dib u noqoshada dareenka); sare iyo doji. Sidoo kale haddii ganacsatadu isticmaalaan shaashad banaan ama buuxsan shaxanada shaxanka buuxa shamaca ama muraayada ayaa ka dhigan xaaladaha khatarta ah, halka shamaca foornada ee bannaan ay muujinayaan dareenka boorka.
Intaas ka dib shuruudaha kale ee lagu muujinayo dareenka waa qaabka dhabta ah ee shumaca. Jidhka dheer ee xiran oo leh hooskii weynaa waxay u dhigantaa isbeddel xoogan, gaar ahaan haddii qaabkani soo noqnoqodo dhowr maalmood 'shumacyo. Isbarbardhigga iyo iskucelidda arrintan iyada oo isku dayaysa in la xakameeyo xasiloonida iyadoo la adeegsanayo shamuusyada caadiga ah waxay khatar u tahay aragtida ah in la adeegsado isticmaalka shamacabka HA si aad u fudud, hase yeeshee looma lumiyo mid ka mid ah qiimaha saadaalinta qiimaha dabeecadda.
Ganacsatada cusub iyo kuwa ganacsadaha ah ee Heikin Ashi waxay bixiyaan fursad weyn si ay u ogaadaan faa'iidooyinka ganacsiga ee ka muuqda shaxda nadiifka ah ee aan qarsooneyn. Waxay bixisaa xal 'hab guri ah' oo u dhexeeya calaamadaha ku salaysan ganacsiga iyo isticmaalka shamuusyada dhaqanka. Ganacsatada intooda badani waxay isku dayaan inay tijaabiyaan Heikin Ashi oo ay sii joogaan iyada oo la siinayo fududahay iyo waxtarkeeda maaddaama caddaynta iyo tayada waxtarka leh ee lagu soo bandhigo jaantusyada maalinlaha ah ay bixiyaan qaar ka mid ah qaababka turjumidda ugu fiican.
« Faa'iidooyinka Fedraaliga ee Federaalka ah ee kobaca dhaqaalaha ee kobcinta dhaqaalaha ee ku saleysan korodhka shaqooyinka xooggan iyada oo dollarku gaaro shan sano oo kor u kaca Suuqyada yurub ayaa rikoodh cusub ku soo rogay FOMC oo ka soo horjeesatay ganacsiga hore, iyada oo habeenadii isniintii ay heshiisyadii EU gaareen heshiis ku saabsan midawga yurub »